Iindlela ezi-5 zokuba uLuhlu lweNtlalo luyakha uLwaziso ngeBrand oyifunayo ngokwenene | Martech Zone
Amashishini ngoku kufuneka abe nolwazi ngakumbi kunangaphambili ukuba ukubeka esweni imidiya yoluntu ngelixa uzama ukuphucula ukwamkelwa kwegama akwanelanga.
Kuya kufuneka ugcine indlebe yakho emhlabeni ukuba bafuna ntoni na abathengi bakho (kwaye abafuni), kunye nokugcina ngokuhambelana neendlela zangoku zeshishini kunye nokhuphiswano.
Ngena ekuphulaphuleni ekuhlaleni. Ngokungafaniyo nokujonga nje, okujongwa kukukhankanywa kunye nereyithi yokuzibandakanya, ukumamela zeroes kuluntu emva kolwazi. Masingene kule meko kwaye sibone ukuba kutheni ibalulekile.
Yintoni ukuLwazisa ngeBrand?
Ukwazisa ngeBrand linani nje labantu abaziyo malunga neshishini lakho kwaye bayayiqonda ukuba ikho. Ayinamsebenzi ukuba beve ngawe, okanye bazi ukuba ungubani, okanye bayayiqonda into oyenzayo.
Xa kuziwa ekwakheni ulwazi ngophawu, kubalulekile ukuba wenze umfanekiso wenkampani yakho eya kuthi ikuvumele unxibelelane nabathengi kwinqanaba leemvakalelo.
Ukwakha uphawu yinto ebalulekileyo yentengiso ye-Intanethi. Kubalulekile ukuba uqiniseke ukuba abantu bayazi ukuba ungubani kwaye luphawu luni olumeleyo. Iya kubanceda bakuthembe kwaye bakholelwe kulwazi olunikezelayo.
Ikwayindlela entle yokwandisa abaphulaphuli bakho kunye nokuseka ukuthembela kubantu abasele bekwazi.
ngaphandle Ulwaziso lwebrandXa abathengi bakufumana, abanokuyazi okanye bayithembe imveliso okanye inkonzo yakho.
Lulinganiswa njani uLwaziso ngeBrand?
Masiqale ngemilinganiselo yokuqonda uphawu lwexabiso, ekufuneka ikunike ukuqonda ngokubanzi malunga nokuqonda uphawu lwakho kwi-intanethi.
Jonga ubukhulu begama lakho lokukhankanywa kunye nalapho zivela khona iindwendwe zakho. Eyona ndlela ilula yokwenza oku kukulandela umkhondo wendlela ethe ngqo (nayiphi na itrafikhi eya ngqo kwindawo yakho ngaphandle kokudluliselwa kwinjini yokukhangela okanye kwimidiya yoluntu) ngezixhobo ezinje ngeGoogle Analytics kunye neGoogle Search Console.
Ngezi zixhobo, unokujonga ukubekwa kweinjini yokukhangela kwenkampani yakho, kubandakanya nenani labantu abachwetheze iwebhusayithi yakho ngokuthe ngqo kwibar yokukhangela.
Amanqanaba emilinganiselo yokwazisa ngeempawu, kwelinye icala, kunzima ukulinganisa.
Ukufumana umfanekiso ochanekileyo ngokwenyani womfanekiso wentengiso yoluhlobo lwakho, jonga ukukhankanywa kwegama lakho kwi-Intanethi kwaye uphonononge ingxelo yabathengi bakho, nokuba ilungile, ayilunganga, okanye ayithathi cala.
Sebenzisa amaqonga eendaba ezentlalo afana ne-Facebook kunye ne-Twitter ukulandela umkhondo wekhredithi yakho. Ngokulandela umkhondo wevolumu yokukhankanywa kunye neemvakalelo zakho zomsebenzisi, ungawaqhagamshela amachaphaza phakathi kolindelo lwabathengi bakho kunye nolwaneliseko.
Kodwa ngaba ukubeka iliso kwimidiya yoluntu kuphela kwanele ukuqonda ngokwenyani ulwazi lwakho lophawu?
Yilapha Ukumamela ngokwasentlalweni iza luncedo.
Yintoni ukuphulaphula ekuhlaleni?
Ukumamela ekuhlaleni kuxa umamele uphawu lwegama lakho ukuze uqonde ngcono ukuba abantu bacinga ntoni malunga neemveliso kunye neenkonzo zakho.
Usebenza njani ukumamela ekuhlaleni? Ngokwesiqhelo ubuya kumamela igama lakho lophawu, abo ukhuphisana nabo kunye namagama aphambili anxulumene neshishini lakho. Kodwa awuyi kuyenza le kuphela kwimidiya yoluntu. Unokwenza nokumamela ekuhlaleni kwiisayithi ezahlukeneyo, kubandakanya iibhloko, iisayithi zeforum, kunye naphina kwenye indawo kwi-Intanethi.
Uya kuthi emva koko usebenzise idatha oyiqokeleleyo ukulandela isenzo esilandelayo njengokucwangcisa ukuthengisa umxholo wakho ukuze ubancede abaphulaphuli bakho okanye uphucule imveliso okanye inkonzo kwindawo yokuqala.
Ngamanye amagama, ukumamela ekuhlaleni yeyona ndlela ikhawulezayo yokubona ukuba bathini na abathengi bakho malunga negama lakho kunye nokwazi ulwazi lwamva nje kwishishini lakho, nakwabo ukhuphisana nabo.
Ukumamela kwezentlalo kuyafana nokujonga imidiya yoluntu kuba ujonge ukukhankanywa kwegama; kwahlukile, kuba ijolise kwimeko yokuchazwa kwezi zinto ukuze kubhikice ulwazi olubalulekileyo lweshishini.
Ke, nantsi indlela amashishini asebenzisa ngayo ukumamela ekuhlaleni ukuphucula ulwazi lwabo lwebrand.
Kutheni le nto iiBrand zamkela ukuMamela ngokuHlala?
Ukuchonga iingongoma zentlungu Ngokusebenzisa ukumamela ekuhlaleni, ungahlalutya ukuba kukho into engekhoyo ekhangelwe ngabathengi kwaye engakhange ijongiswe yimveliso yakho okanye okhuphisana nayo. Emva koko, unokusebenzisa le datha kwi-pivot kwaye uphucule isicwangciso sakho sokuthengisa ukulungelelanisa ngqo oko kufunwa ngabathengi bakho. Ukusebenzisa iZazisi zikaGoogle kuphela ukubeka esweni umzi mveliso wakho kunye negama lakho alonelanga kule mihla, njengoko uQheleko lweZaziso zikaGoogle kunye nokubaluleka kwazo kungangabikho ngamanye amaxesha. Ngokusebenzisa isixhobo esintsonkothileyo njenge UAwario, unokugcina umkhondo wophuhliso lwamva nje kwishishini lakho kunye nokuhlalutya abakhuphisana nabo ngokucokisekileyo.
Ukulandela iiNtsingiselo zaMva nje -Ukwazi nje amanqaku eentlungu zomthengi wakho akonelanga. Kuya kufuneka uyazi ukuba yintoni evelayo kwishishini lakho ukuze ukwazi ukukhwela kunye nokubamba abaphulaphuli bakho ngaloo ndlela. Amagama aphambili kunye nezihloko ozijongileyo zihlala zivela njengoko ixesha lihamba. Ukufumana ulwazi ngakumbi kwimithombo emininzi ngaxeshanye, izixhobo ezinje ngeAwario zikunceda ufumane amagama aphambili kunye nezihloko abantu abazisebenzisa rhoqo kwiivenkile ezininzi ezikwi-Intanethi.
Ukuphucula inkonzo yaBathengi -Akuyomfihlo ukuba abathengi babhenela kumajelo eendaba ukuze bakhalaze malunga neempawu. Uvavanyo olwenziwe ngu Ukalisho lweJD lwaMandla ifumanise ukuba i-67% yabantu basebenzisa imithombo yeendaba ekuxhaseni abathengi; Uhluma lweNtlalo ifumanise ukuba ama-36% abantu abanamava amabi kwinkampani bazakuthumela malunga nawo kumajelo onxibelelwano. Ngokusebenzisa ukumamela ekuhlaleni, uya kuba nakho ukufumana ulwazi olungcono malunga noko kuthethwa ngabaphulaphuli bakho malunga nemveliso okanye inkampani iyonke Oku kunika amathuba angapheliyo ukuba uphawu lwakho luphucule kungekuphela nje umnikelo wakho kodwa nendlela ophatha ngayo ingxelo yabathengi kunye nezikhalazo.
Ukwenza iiNkokeli ezintsha -Emva kokuba ucofe ekuphulaphuleni ekuhlaleni, uya kumangaliswa kukufumanisa ukuba umthengi omtsha unokuza xa befuna ingcebiso ngemveliso.
Ukuthengisa kweNtlalo ngamagama aphambili -Ngoncedo lokumamela ekuhlaleni, unokugcina amagama athile asetyenziswa ngabathengi ukuphanda iingxaki zabo kwaye emva koko bamisele iingxoxo ezinzulu kunye nabo ukuthengisa kwezentlalo. Musa ukuzithengisa nzima ekuqaleni, kodwa endaweni yoko, yabelana ngolwazi oluncedo abalukhathaleleyo. Oku kuyakunceda ukuba ubonise uphawu lwakho njengeyona nto ilungileyo xa kufika ixesha lokwenza isigqibo sokuthenga.
Ukunyusa ulwazi lwakho lwentengiso, kufuneka umamele ekuhlaleni. Ngaphandle kokumamela ekuhlaleni, awuyi kuba nakho ukubona ukuba yeyiphi emi emva kokukhankanywa kwegama lakho, kwaye yintoni elungileyo kwaye yintoni engekho malunga nomrhumo wegama lakho.
Ukuphulaphula ngokwasentlalweni kuya kunceda uphawu lwakho luphume kukhuphiswano ngokukuvumela ukuba ugcine umkhondo weentsingiselo zamva nje kunye namanqaku eentlungu kubathengi kwishishini lakho, kwaye uzisebenzisele inzuzo yakho. Makhe sijonge kwizifundo ezithile zendlela nganye yezi zibonelelo zokumamela ekuhlaleni eziye zaphunyezwa ngayo kwiimveliso.
Isifundo seNtetho yokuPhulaphula uLuntu: I-Tylenol ichonga iiNqaku eziNtlungu (Ngokwenyani)
Uphawu lonyango, uTylenol, wayefuna ukuchonga iintlungu kunye nokudana kwabantu abaphethwe yintloko yoxinzelelo. Ukusuka kuyo uphando lokumamela ekuhlaleni, UTylenol wafumanisa ukuba abantu abadala abali-9 kwabali-10 bayakufumana intloko ebuhlungu ngaxa lithile kwaye abantwana aba-2 kwabathathu baya kuba nentloko beneminyaka eli-3 ubudala.
UTylenol walusebenzisa olo lwazi ukuze alusebenzise qhinga urhwebo ngokudala umxholo ejikeleze loo ndawo yentlungu.
Isifundo seNdaba yokuMamela ekuhlaleni: I-Netflix ichonga iinguqu zeMillenial
Ukusetyenziswa kweNetflix Ukumamela ngokwasentlalweni Ukubeka iliso kwimikhwa yamva nje phakathi kwabaphulaphuli ekujolise kubo- iwaka leminyaka- kwaye emva koko ubakhuthaze ukuba babhalise kwiqonga labo. Inkampani ikwazile ukufaka ifayile ye- Indlela kaGerard utyekelo kwi-Twitter ngokutshintsha i-bio yayo ye-Twitter ukwenza ukuba abaphulaphuli banxibelelane nophawu lweNetflix.
Funda iNqaku elipheleleyo leNetflix
Isifundo seNdaba yokuMamela kwiNtlalo: UMazantsi-ntshona asombulula imiba yeenkonzo zabaThengi
I-Southwest Airlines iyamamela ngokufanelekileyo kwizikhalazo zabathengi babo kwimidiya yoluntu.
Njengomzekelo, umthengi ogama linguWilliam thunyelwe nge tweet malunga nokubaleka kwakhe ukusuka eBoston Logan International Airport ukuya eBaltimore Washington International Airport, nanjengoko waqaphela ukuba inqwelomoya yayisaqhuba eChicago.
U-Anna, ummeli weqela lezononophelo lwentlalontle, waqaphela kwaye waphendula kwi-tweet emva kwemizuzu eli-11.
Ucacisile ukuba inqwelo moya yakhe kufuneka ibuyele eChicago ngenxa yolondolozo, kodwa wazama konke okusemandleni akhe ukufumana umthengi kuyo nayiphi na inqwelomoya ekhoyo ngokukhawuleza.
Emva kwenye i-tweet evela kuWilliam ebuza ukuba kunokwenzeka ukutshintshela kwi-8: 15 am ngenqwelomoya ukuya kwindawo enye, uAnna wajonga ukubona ukuba iqela lakhe lingenza ntoni.
Uye wabulela noWilliam ngokwazisa i-airline ngalo mbandela, kwaye uyayixabisa impendulo yakhe kwangoko.
@SouthwestAir kuqhubeka ntoni ngeFlight SWA 4919 BOS ukuya kwi-BWI? Kubonakala ngathi inqwelomoya engenayo isateksi eChicago ...
-William Batista (@the_free_willy) Septemba 8, 2019
Ngokubanzi, yonke inkqubo yokusombulula isikhalazo somthengi ithathe imizuzu eli-16.
Isifundo seNkundla yokuMamela uLuntu: Zoho Backstage Drives lead
Zoho Umva, isoftware yolawulo lomnyhadala kwi-Intanethi, efikelele kwi i-tweet Ukusuka kumsebenzisi ogama linguVilva ukucebisa ukuzama imveliso yabo. UVilva wayesazi ukuba angasebenzisa i-Eventbrite ukulawula ubhaliso lweworkshop yakhe, kodwa wayejonga ezinye iindlela ezingcono.
I-Zoho Backstage yongeze ukuba imveliso iyinxalenye yesoftware suite (iZoho Suite) kwaye inokumnceda ngokuqhuba iindibano zocweyo, iinkomfa, ukwazisa ngemveliso, okanye nayiphi na enye indibano encinci / enkulu.
Hi @lungelokhi, ukhe wajonga @ZohoBackstage okwangoku? Inxalenye ye- @Zoho isuti kwaye ikunceda ukuba usebenze iindibano zocweyo, iinkomfa, ukwazisa ngemveliso, okanye nayiphi na enye indibano encinci / enkulu.
Ndingathanda ukwazi okungakumbi malunga neemfuno zakho! I-DM okanye i-imeyile kuthi support@zohobackstage.com.
-Zoho Backstage (@ZohoBackstage) Disemba 7, 2020
Bayigqibile i-tweet yabo ngomnxeba wokuthatha amanyathelo, becela uVilva ukuba abazise iimfuno zakhe ngokubathumelela i-Twitter DM okanye i-imeyile.
I-Awario yeNtlalontle yezeNtlalontle kunye noHlalelo
I-Awario sisixhobo sokumamela ekuhlaleni esinika iimveliso ukufikelela kwidatha ebaluleke kwishishini labo: ukuqonda kubathengi babo, kwintengiso nakukhuphiswano.
Fumanisa ngakumbi ngeQonga leNtlalontle yeAwario
Ukwazisa: Martech Zone lilungu le UAwario kunye nokusebenzisa ikhonkco lokudibana kweli nqaku.
tags: awariouhloboUlwaziso lwebrandlandela iindlela ze-twitterukuvelisa izitsha ezintshazichonge iindawo zentlunguphucula inkonzo yabathengiurhwebo inboundNetflixUkumamela ngokwasentlalweniiimeko zokumamela ekuhlaleniamagama aphambili okuphulaphula ekuhlaleniuphando lokumamela ekuhlaleniImidiya yokuncokolauhlalutyo kwimidiya yoluntuubuntlola beendaba zosasazoTwitterInkonzo yabathengi ye-twitterIsizukulwane esikhokelayo se-twitterIindlela ze-twittertylenolyintoni ulwazi ngebrandyintoni ukumamela ekuhlalenizoho emva kweqonga
I-OneUp: Thumela ngokuzenzekelayo kuGoogle kwiShishini lam ukusuka kwi-RSS feed yakho